ch 5 uphawu – 2fish
ekhaya / Bible / YeVangeli kaMarko / ch 5 uphawu
5:1 Kwaye baya phesheya lexinene ulwandle, baya kummandla wabaseGadara.
5:2 Yaye njengoko lemka kuyo esikhepheni, kwahlangana ngoko nangoko, kumangcwaba, ngokuthi umntu onomoya ongcolileyo,
5:3 ngubani ukuba indawo yakhe yokuhlala kunye emangcwabeni; abangalwamkelanga nabani na ukuba unako ukumbopha, nangemixokelelwane.
5:4 Ngenxa yokuba wayebotshwe ngokufuthi ngamakhamandela nezidanga, ubengaphule iintsontelo, waphula nasentanjeni; kwaye kungekho namnye waba nako okumdambisa.
5:5 Yaye wayesoloko, imini nobusuku, phakathi emangcwabeni, okanye ezintabeni, ememeza ezijeca ngamatye.
5:6 Ke akumbona UYesu ekude, wagidima, waqubuda kuye.
5:7 Kwaye bedanduluka ngezwi elikhulu, uthe: "Yintoni mna kuwe, uJesu, uNyana wOyena Thixo Uphakamileyo? Ndiya kukhunga ukuba nguThixo, ukuba ungandithuthumbisi. "
5:8 Kuba wathi kuye, "Suka le ndoda, kuwe umoya ongcolileyo. "
5:9 Wambuza: "Ungubani igama lakho?"Uthe ke yena kuye, "Igama lam ndinguMkhosi, kuba sibaninzi. "
5:10 Yaza yambongoza kakhulu, ukuze angabi babekhupha ngokusuka kummandla.
5:11 Yaye ngaloo ndawo, eduze kwale ntaba, kwakukho ugxuba olukhulu lweehagu, lweehagu.
5:12 Kwaye ke oomoya inxusa, bathi: "Sithumele ezihagwini, ukuze angene kubo. "
5:13 Waza uYesu ngokukhawuleza Wabanika imvume. Baphuma ke oomoya abangcolileyo, wafayo, zangena ezihagwini. Ke umhlambi lowo, owawumalunga namawaka amabini, waphaphatheka, wehla ngamandla omkhulu elwandle, yaye zarhaxwa elwandle.
5:14 Ke abo nokuba yemiyo, basaba, baza bakuxela oko esixekweni nakwiindawo ezisemaphandleni. Ke bonke abantu, baya kubona ukuba kwenzeka ntoni.
5:15 Bafika kuYesu. Ke babona umntu lowo bakhathazwa yidemon, ehleli, ambathisiwe, enengqondo sane, Boyika.
5:16 Bathi ke nabo babonileyo, wabachazela kuzo indlela awaqhubana ngayo umntu idemon, nangeehagu.
5:17 Yaye baqalisa simcele ukuba, ukuze ukuba emke emideni yabo.
5:18 Yaye njengoko benyuka emkhombeni, umfo lowo bakhathazwa ziidemon Baqala ukumbongoza, ukuze abe kunye naye.
5:19 Kwaye Yena akazange avumele ukuba, kodwa wathi kuye, "Yiya ebantwini bakho, endlini yakho, esinityela oko zingako ukuba zinkulu kwazo izinto uYehova akwenzele zona, nendlela uye nofefe kuwe. "
5:20 Yaye waphuma waza waqalisa ukushumayela kule Cities Ten, inkulu kangakanani na izinto uYesu abemenzele zona. Kwaye wonke wayezibuza.
5:21 Ke kaloku, akubon ukuba uYesu uwelile ngomkhombe, phezu lexinene kwakhona, isihlwele esikhulu beza ndawonye phambi kwakhe. Waye engaselwandle.
5:22 Ke kaloku omnye wakubaphathi yesikhungu, egama linguYayiro, wasondela. Ambone, wawa phantsi ezinyaweni zakhe.
5:23 Waza wabongoza ukuba kakhulu, bathi: "Kuba intombi yam ngasekupheleni. Yiza uze ubeke isandla sakho phezu kwayo, ukuze abe sempilweni kwaye uphile. "
5:24 Waza wahamba naye. Kwaye isihlwele esikhulu samlandela, yaye bathi ngunga phezu kwakhe.
5:25 Kwaye kukho ntokazi eyayinethombo legazi iminyaka elishumi.
5:26 Yaye banyamezela kakhulu kumagqirha amaninzi, yaye eyayidleke konke anakho kungekho yingenelo konke konke, kodwa kunokuba waba mandundu.
5:27 ke, xa yathi yakuva ngaye uYesu, esondela phakathi kwesihlwele ngasemva kwakhe, waza wachukumisa ingubo yakhe.
5:28 Ngokuba wathi: "Ngenxa Ukuba ndithe ndachukumisa nokuba yingubo yakhe, Ndiya uya kusindiswa. "
5:29 yaye ngoko nangoko, umthombo wegazi layo asha, weva emzimbeni wakhe ukuba uphilisiwe ukusuka inxeba.
5:30 Eqiqe kwaoko uYesu, eqonda ngaphakathi kuye ukuba amandla aphumileyo kuye, waguqukela kwindimbane, wathi, "Ngubani na ochukumise iingubo zam?"
5:31 Beza abafundi bakhe bathi kuye, "Uyabona ukuba isihlwele ayicinezele ngeenxa zonke kuwe, kwaye ube wena usithi, 'Ngubani lo undichukumisileyo?' "
5:32 Noko yena wasinga-singa ukuba ambone lowo uyenzileyo le nto.
5:33 kodwa ngokwenene, ibhinqa, ngayo ngoloyiko nokungcangcazela, ikwazi oko kwenzekileyo kuyo, bawa phantsi phambi kwakhe, yaye wamxelela yonke inyaniso.
5:34 Wathi yena kuye: "Intomba, ukholo lwakho lukusindisile. Hamba unoxolo, uze uphile inxeba lakho. "
5:35 Ke kaloku, akubon 'ukuba usathetha, befika ukusuka elongamelayo kwindlu yesikhungu, bathi: "Intombi yakho ifile. Usamkhathazelani na uMfundisi?"
5:36 kodwa uYesu, bakuliva ilizwi alithethileyo, wathi kwigosa lendlu yesikhungo: "Sukoyika. Kufuneka kuphela kholwa wena. "
5:37 Ke yena umntu angasiyekeli ukumlandela, , kwakuphela nguPetros, noYakobi, noYohane umntakwabo Yakobi.
5:38 Kwaye baya endlwini elongamelayo kwindlu yesikhungu. Yaye Ndibone ingxokolo, inyembezi, nokulila kakhulu.
5:39 Sangena, Wathi yena kubo: "Yini na ukuba nothuke? Elila? Intombazana ayifile, kodwa ulele. "
5:40 Baye bemsinekela ke. kodwa ngokwenene, akuba ebakhuphele phandle bonke, wathabatha uyise nonina wentombazana, kunye nabo babekunye naye, waza wangena apho wayelele intombi.
5:41 Wathabatha intombazana ngesandla, Wathi yena kuye, "Talita, kumi," oko kukuthi, "Intombi encinci, (Ndithi kuwe) kuvela.
5:42 Kwaye kwangoko intombazana eselula wasukuma waza wahamba. Ngoku wayeneminyaka elishumi ubudala. Kwaye kokubetha ngesiquphe kunye ngokumangala okukhulu.
5:43 Kwaye wabayalela ngokungqongqo, ukuze kungabikho namnye ubuya azi ngayo. Kwaye wabayalela ukuba inikwe into yokudla.
EyeKhala 16, 2019